Soomaalida oo ay dhib ku noqotay in ay reerkooda keensadaan Iswiidhan | Somaliska
Go'aan ay gaartay maxkamada Sare ee Socdaalka bishii Janaayo ayaa dhib wayn ku noqtay bulshada Soomaaliyeed ee Sweden. Sida ay qortay wakaalada wararka TT wixii ka horeeyay bishii Janaayo 90% dadka soomaalida ee dalbada reerahooda ayaa loo keeni jiray balse wixii ka dambeeyay go'aanka maxkamada dadka loo keeno xaaskooda, ilmahooda iyo kharaabadooda ayaa ku dhawaatay zero. Go'aanka maxkamada socdaalka ay gaartay bishii Janaayo ayaa dhibaata gaar ah ku noqday Soomaalida sharciga ka soo dalbanaysa Afrika ayagoo looga baahanyahay in ay keenaan baasaboor ay ku cadeeyaan karaan aqoonsigooda. Balse maadaama baasaboor Soomaali ah oo Hay'ada Socdaalka Iswiidhan ay akhbasho uusan jirin, arintaan ayaa caqabad ku noqotay Soomaalida. Waayihii hore ayaa Laanta Socdaalka waxay baahida aqoonsiga ka hor marin jirtay in dadka loo keeno reerkooda balse taas waxaa diiday go'aanka Maxkada Socdaalka. Balse waxaa jira wadooyin kale walow aysan fududeyn oo ay reeraha Soomaalidu ku cadeyn karaan aqoonsigooda sida dhiiga DNA iyo haddii ay jiraan qaabab kale. Sveriges Radio.
Go’aan ay gaartay maxkamada Sare ee Socdaalka bishii Janaayo ayaa dhib wayn ku noqtay bulshada Soomaaliyeed ee Sweden.
Sida ay qortay wakaalada wararka TT wixii ka horeeyay bishii Janaayo 90% dadka soomaalida ee dalbada reerahooda ayaa loo keeni jiray balse wixii ka dambeeyay go’aanka maxkamada dadka loo keeno xaaskooda, ilmahooda iyo kharaabadooda ayaa ku dhawaatay zero.
Go’aanka maxkamada socdaalka ay gaartay bishii Janaayo ayaa dhibaata gaar ah ku noqday Soomaalida sharciga ka soo dalbanaysa Afrika ayagoo looga baahanyahay in ay keenaan baasaboor ay ku cadeeyaan karaan aqoonsigooda.
Balse maadaama baasaboor Soomaali ah oo Hay’ada Socdaalka Iswiidhan ay akhbasho uusan jirin, arintaan ayaa caqabad ku noqotay Soomaalida.
Waayihii hore ayaa Laanta Socdaalka waxay baahida aqoonsiga ka hor marin jirtay in dadka loo keeno reerkooda balse taas waxaa diiday go’aanka Maxkada Socdaalka.
Balse waxaa jira wadooyin kale walow aysan fududeyn oo ay reeraha Soomaalidu ku cadeyn karaan aqoonsigooda sida dhiiga DNA iyo haddii ay jiraan qaabab kale.